Mini ductor induction heater-mini inductor heater-yakagadziriswa inductor heater
musha / Inducheti Inoshandiswa Nemaoko / mini ductor induction hita / Mini ductor induction hita
Mini ductor induction hita
Categories: Inducheti Inoshandiswa Nemaoko, Induction Inotakura Heater, Induction kupisa boiler, mini ductor induction hita Tags: ductor, ruoko rwakabata, inductor, mini ductor, Mini ductor hita, mini ductor kudziyisa, mini ductor yekudziya system, mini ductor induction hita, mini ductor inobvisa hita, mini induction hita, mini induction inobvisa, mini inductor, Mini inductor hita, mini magneti enductor, mini nzungu inobvisa hita, ductor diki, diki inductor heater
Mini ductor induction heater / mini inductor heater / ruoko yakabata inductor heater mudziyo unoburitsa wakanamatira uye r kutu lug nuts, mabhairi uye ekumisa mu auto, marori, kurima, chikepe kugadziriswa.
Iyo Mini ductor induction heater / mini inductor heater / yakabata ruoko inductor heater. KIA-1000W inoshandisa magineti induction heat tekinoroji yekupisa kubata zvikamu zvidiki pamotokari, michina, dzakasiyana-siyana simbi uye polyethylene. Iyo inonyanya kushandiswa kupisa dzakasiyana dzemotokari rusty mabheti, nzungu, magiya, Mapuru, mapuru, matare, sensors, etc. Hakuna moto wakashama, hapana chikonzero chekudzivirira akasiyana siyana anopisa zvinhu zvakaita semapurasitiki; hapana kutonhora kwemvura, kushanda kwakachengeteka, kushandiswa nyore uye nyore kutakura.
Yakaregedza kupisa, nyore kushandisa kunze uye mukati. Hapana kupisa, kuchengetedza kuchengetedza zvimwe zvinhu, kugadzirisa basa nekushanda. Izvo hazvikuvadze zvikamu padyo nekushisa. Izvo hazvizokuvadze zvakakomberedza zvikamu kuburikidza nerabha kana plastiki. Hapana murazvo wakavhurwa. Nheyo: Kushandiswa kwesimbi uye kusinga simbi kupisa mumunda wemagetsi kunogona kushandura banga rikatsvuka. induction heating device mukati memasekondi makumi maviri. Iko hakuna kupisa murazvo wekushisa kudzivirira kuve kwekuchengetedza kwekushanda kwako. Iyo midziyo yerabha uye yekunamatira inogona zvakare kupiswa uye kutarisa kubva kunze kwezvinhu zvekushandisa. Chikamu chekushandiswa: screw kubviswa kwemagetsi shongwe, screw kubviswa kwemagetsi emagetsi-makuru, magetsi akasimba switch, screw kubviswa kwevashanduri, screw kubviswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kubvisa vinyl mitsetse isina solvent kana rabha, kubviswa kwemahoses uye AC routing , kupisa uye kuwedzera fani Kuonda kwebhandi kunoita kuti zvive nyore kuisa, ngura, uye yakaremara screw kubviswa, uye inogona kushandiswa muku disasasita maindasitiri akasiyana siyana nemidziyo.
Muchina uyu haukodzeri chete shopu yekugadziriswa kwemotokari, shopu ye 4S, shopu yekugadzirisa mota, kugadzira fekitori yekugadziridza, michina yekugadzirisa, chaiyo yekushandisa, yekugadziridza dhizaini, dhipatimendi rekugadzirisa, dhizaini yemahara, asiwo zvekutarisa , Kupisa kurapwa kwezvikamu zvidiki, chidiki diki chesimbi yakakosha (goridhe, sirivheri, nezvimwewo) kunyungudutsa, hushoma hwesimbi isina tsvina kunyungudika, nezvimwewo.
Disassembly yemhando dzakasiyana-siyana dzehuswa danda mabhandi.
Kupisa kurapa kwemotokari corrosion mabheti, nzungu, magiya, pulleys, pulleys, fani.
Kupisa kurapa kwezvekushandisa zvishandiso yepamusoro frequency yekudzima muchina, senge vise, nyundo, pliers, wrench.
Kupisa uye disassembly yemitsara yakasiyana yekugadzira, meishini michina, echiridzwa chechikamu chechikamu.
Yakakwira frequency ichipisa kupisa kurapwa kwemasimba akasiyana-siyana zvishandiso zvegetsi magiya.
Welding ye carbide yakaona maburi aine makuru uye madiki mazino.
Simbi yesimbi, zvikamu zvinokachira, zvinowedzera.
Welding yezvishongo wachi wachi.
Indasitiri yemagetsi: waya dzakanyatsonaka, dzakasiyana siyana dzemagetsi, zvikamu zvakanaka, sirivha uye sirivheri zvinotengesa.
Mechaniki uye yemagetsi indasitiri: simbi yakanaka majoini, sirivha-mhangura yakavharidzirwa micro motors, shafts uye kumwe kudzima nekupisa.
Indasitiri yesheya: waya yevhu induction annealing.
Toy indasitiri: Clockwork yakaonda simbi pepa inotsvairwa.
Kutetepa kwemapanga: Mapanga mapepa uye shangu maburi anodzimwa.
Mazhinji matanda ekugadzira matanda, akadai se: ax, kuronga uye kumwe kupisa kurapa
Hydraulic zvikamu zvakaita seye plunger yeplunger pombi, rotor yepombi rotor, kudzorera shaft pane akasiyana mavharuvhu, giya regetsi pombi uye imwe yakakwira-frequency quenching.
Kupisa kurapa akasiyana-siyana akaba uye mudhudhudhu yakakwirira frequency kudzima michina, akadai: crankshaft, inobatanidza tsvimbo, piston pini, camshaft, vhevhesi, akasiya siyana magiya mune gearbox, dzakasiyana foloko, dzakasiyana spline shafts, kuendesa High frequency induction kupisa kupisa kurapwa kwemabhata, akasiyana zvidiki shaft crank pini, akasiyana rocker maoko, rocker shafts, nezvimwe.
Ichi chigadzirwa chinogona kupisa kusvika kumadhigrii 800 ipapo, hapana murazvo wakazaruka unogadzirwa, hapana kutonhora kwemvura kunodikanwa, uye kushanda kwacho kuri nyore.
Kana isina kukuvadzwa nemaune kana kushanda zvisina kunaka, chigadzirwa chacho chinovimbiswa gore 1
Simba rekushanda Chikamu chimwe chete110v, 50Hz / 60Hz
Chikamu chimwe chete 220V, 50Hz / 60Hz
Mhando yekushandisa voltage 100V-120V
Simba rekubuda 1KW
Kuchinja-chinja kwehuwandu 30-100KHZ
Kubuda kwazvino 10A
Kutonhora Nzira Kutonhora kwemhepo
Tembiricha inodzivirira poindi 85 ℃
kutaura kuti ichokwadi CE, UL, CCC, Inowanikwa yeCOC, POVC
Duty kutenderera 100%
zera 380mm * 64mm
Izvo zvinongedzo zvinouya ne Mini Induction hita.
Dhiza 30mm Coil 2 zvidimbu
Dhiza 40mm Coil 2 zvidimbu
Dhiza 50mm Coil 2 zvidimbu
Kureba 750mm tambo yeiyo DIY coil 2 zvidimbu
Coil yeku Plita kupisa 2 zvidimbu
Mini induction sunungura remover hita